Kenya oo dib u soo celisay qorshihii ay ku celinaysay qaxootiga ajinebiga ah ee degan dalkaasi – Radio Daljir
Luulyo 28, 2013 3:37 b 0
Nairobi, July 28, 2013 – Dowladda Kenya ayaa dar-dar gelisay mar kale qorshihii ay dib ugu celinaysay dadka Soomaalida ah ee ku nool magaalooyinka dalkaasi, kuwaasi oo haysta kaararka aqoonsiga qaxootinimo ee Qaramada Midoobey.
Diblumaasiyiin u hadlay wasaarada arimaha debeda ee dalka Kenya oo uu soo xigtay wargayska Daily Nation ee dalkaas, waxay sheegeen in aysan suurta-gal ahayn wakhtigaan in mar kale loo dul-qaato culayska qaxootiga Soomaalida ah ee degan magaalooyinka Kenya.
Wasaarada arimaha debeda ee dalka Kenya waxay intaas ku dartay in ay caalamka ka raadin doonaan taageero balaaran oo la xiriirta sidii dadkaasi loogu celin lahaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Jimcihii ina dhaafay Maxkamada sare ee dalka Kenya ayaa joojisay qorshe horay u soo jiray oo Kenya ku doonaysay in ay ku celiso dadka Soomaalida ah ee degan magaalooyka ?waa weyn ee dalkaas, balse arintaan ayaa noqonaysa mid dood cusub dhalin karta.
Bishii December ee sanadkii tegey ayey ahayd markii dowladda Kenya ay soo saartay qorshe la meel mariyey, kaasi oo dib loogu celinayey dadka Soomaalida ah ee degan Nairobi iyo magaalooyinka kale, qorshahaas ayaa noqday mid hir-galay balse muddo kadib la hakiyey.
Hay?adaha xuquuqda aadanaha Qaramada Midoobey ee Human Rights Watch ayaa sheegtay shalayto in Kenya gabood falo loogu geystay Soomaali fara badan, waxay hay?adu ku eedeysay Kenya dhibaatooin isugu jira Dil, Kufsi iyo dhac ay geysteen booliska.
Baahin: Sabti, 27 July 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo